Umbono: Uqhekeko kwi-ANC KwaZulu-Natal | News24
Umbono: Uqhekeko kwi-ANC KwaZulu-Natal
Durban - Uqhekeko kwinhlangano kaKhongolose lukhulu esifundazweni sakwaZulu-Natal njengoba kwakunemibiko yokuthi kunamalunga ambalwa aphezulu atshelwe ukuthi azehlele wona ezikhundleni zawo ngaphambi kokuba axoshwe.
Abantu abaningi bebekuthatha njengamahemuhemu lokhu sengathi abezindaba bazama ukuqala izinkulumo. Lokhu kubonakale ngenye indlela ngesikhathi uNdunankulu waseKZN uSenzo Mchunu ememezele ukuthi uyasula esikhundleni.
Kaze uyofika sekunjani umhlaka 3 kuNcwaba 2016 njengoba kumapeketwan. Ngabe likhona ithemba lokuthula kwaZulu-Natal noma kukhulu okuzayo?
Nansi imibono yabanye abafundi bethu:
Njabulo Nzimande Ngwekazi Mina ngicabanga ukuthi kukhulu okuzayo, uMchunu uyindoda ehlonishwayo futhi ebilalelwa kodwa ngoba esephonse ithawula nje impela lukhulu liyeza. Ngaphandle nje kokuba khona kwesilo kodwa kwezombusazwe kusazoba nzima kakhulu la esfundazweni sakwaZulu Natal. Njengoba kuvele nje isimo simanzonzo kanti futhi iKwaZulu-Natal iyo ehamba phambili ngokubulawa kwabantu okuhlanganisa kuwo namakhansela. Lokhu kuyibeka obala ukuhle kwezinqa zesele ukuthi umbango wezepolitiki mkhulu esifundazweni
Smangaliso Mbatha Mbeje IsiZulu siyasho ukuthi ayinuki ingosiwe lokhu kufakazelekile namhlanje ngoba abamaphepha kade bayizwa le ndaba okusobala ukuthi nalaba abanye oMEC nabo bayalandela.
Wilberforce Mbuthu Uyabona ipolitiki mfethu kweesula abantu emsebenzini ababenayo bezozicebisa kulohulumeni wabantu abampisholo ,kumanje ke badlana bodwa njengezilwane zasendle ngenxa yemali lena yethu thina bakhokhi bentela ,uma wena ungayikhokhanga intela kungelona iphutha lakho maye maye emva kwakho befuna lemali kuthiwe uphule umthetho , ungcono khabazela uphume usadla anhlamvana ukubonge lokho.
Leendokuhle Mqadi uMchunu wenza ubuxoki ethatha isikhundla saWillies Mchunu owayisekela laZweli mkhize ekwakumele kungene yena njengoNdunankulu kodwa usenzo wambangisa so iqgubu leli elidala uzobona zofakwa umchunu uwillies ukumduduza manje.
Samukelisiwe Mkhize lukhulu luyeza luyanyelela dadewethu kababa,angiluboni uzinzo futhinje mancane amathuba okut I-ANC ilibone elidlalayo okhethweni lohulumen basekhaya.